सपनामा शा'रीरिक स'म्पर्क गरेको देखे के हुन्छ ? - jagritikhabar.com
सपनामा शा’रीरिक स’म्पर्क गरेको देखे के हुन्छ ?
हरेक मानिसले सपना देख्ने गर्छन् । सपनाको प्रकृति भने फरक–फरक हुन्छन् । उसो त हरेक मानिसले हर दिन फरक–फरक प्रकृतिका सपना देख्ने गर्छन्। मान्छेले वास्तविक जीवनमा पाउन नसकेका वा दबाएर राखिएका इच्छाहरू सपनामा प्राप्त गरेको कुरा देख्छन ।
यसै गरी दबेर रहेका यौन इच्छा पनि सपनामा छताछुल्ल हुन्छ न् । विभिन्न अध्ययन अनुसार अधिकांश युवायुवती त्यस्तो सपना देख्न चाहन्छन्, पुरुषले पहिलो पटक महिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त यो कुरा धेरै महिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि युवकको अपरिचित युवतीसँग आँखा जुध्छ । युवकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो यु’वतीको सिरदेखि पुच्छार सम्म हेर्छ ।
पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पु’रुषले पहिलो नजरमा महिलाका कुन कुन भाग वा विषयमा ध्यान दिन्छ होला मनो’विज्ञहरुका अनुसार पुरुषले सुरुमै महिलाका यी ५ कुरामा ख्याल राखेको हुन्छ ।
कपाल पुरुषले महिलाको सुरुमै ख्याल राख्ने एउटा अंग हो कपाल । सफा, स्वस्थ तथा आकर्षक कपाल भएकी म’हिलाले पु’रुषलाई आकर्षित गर्न सक्छिन् । भनिन्छ युवतीसँग आँखा जुधाइरहँदा युवकले ती युवतीको कपाल सुम्सुम्याइरहेको कल्पना गरिरहेको हुन्छ ।
मुस्कान के तपाइँको मुस्कान आँखासम्मै पुग्यो अर्थात् तपाइँले मुखको मुस्कान सँगै आँखाबाट पनि सोही भाव व्यक्त गर्न सक्नुभयो मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषहरु महिलाको मुस्कान बनावटी हो की साँच्चिकै हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छन् । महिलाको ओठ तथा आँखाको भावको अध्ययन गर्न पु’रुषहरु सक्षम हुन्छन् भनिन्छ ।
बोली पुरुषहरु अलि सुरिलो बोली भएका महिलाहरुप्रति आकर्षित हुन्छन् । बोलिको पिच कम भएका वा धोद्रो आवाज भएका महिलाले पुरुषलाई आकषिर्त गर्न सक्दिनन् । मनोविज्ञहरुका अनुसार सुरिलो बोली भएका महिलाहरु बढी स्वस्थ हुने विश्वास पुरुषमा हुन्छ ।
कम्मर र हीप पुरुषले महिलाको कम्मर र हि-पको आकारमा विशेष ध्यान दिन्छन् । छिनेको कम्मर र चौडा ही-प भएकी महिला पुरुषको रोजाइमा पर्छिन् ।
आँखा वास्तवमा आँखा पहिलो नजर पर्ने अंग नै हो । आँखाको आकार, नशालु पन, नानीको रङ, परेलाको बनावट लगायतका सबै कुराले महिलाको आकर्षणमा प्रभाव पार्छ र पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छन् ।